Shabaab oo ka hadlay in uu xiriir la lahaa Qalbi-Dhagax – XAMAR POST
Shabaab oo ka hadlay in uu xiriir la lahaa Qalbi-Dhagax
By Mohamed Ahmed On Sep 6, 2017
Ururka Al-shabaab ayaa ka hadlay warka maanta ka soo baxay Golaha Wasiirada Soomaaliya, kaasi oo ku aadanaa in C/kariin Qalbi-dhagax uu abaabulayey falal lidi ku ah amniga dalka oo uu in muddo ah ka dhexwaday dalka gudahiisa, xiriirna uu la lahaa Al-Shabaab.
War Shabaabka ay ku soo qoreen baraha ay wararkooda ku faafiyaan ayaa waxa ay isaga fogeeyeen warkan ka soo baxay Golaha Wasiirada, iyaga oo sheegay haba yaraatee in wax xiriir ah aysan la laheyn C/kariim Sheekh Muuse Qalbi-Dhagax.
“Mujaahidiinta Al-Shabaab waxay si adag iskaga fogeynayaan hadal ka soo yeeray Dowladda Federaalka, kaas oo lagu sheegay in shaqsiga lagu magacaabo C/kariim Sheekh Muuse Qalbi-Dhagax kana tirsan jabhada ONLF uu iskaashi la lahaa Al-Shabaab”. ayaa lagu yiri warka ka soo baxay Shabaab.
Shabaabka waxay kaloo sheegeen warka ka soo baxay Dowladda Federaalka in uusan laheyn sal iyo raad, iyaga oo sheegay warkan in uu u baahnaa ka fiirsasho.
Mareykanka oo sheegay in Duqeyn uu ku dilay Dagaalyahano Shabaab ah
Beesha Caalamka oo War kasoo saartay maamulka laga dhisaayo Hiiraan